Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Abhishek Bachchan Awooda Loogu Sheegtay Ee Dhoom 2 (Hritik Nidaam Cusub Ayuu La Yimid) – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Abhishek Bachchan Awooda Loogu Sheegtay Ee Dhoom 2 (Hritik Nidaam Cusub Ayuu La Yimid)
November 24, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: November 24, 2018
Waxaa maanta ookale 24 Nov sanadkii 2006 la daawaday filimka weyn ee Dhoom 2 kaaso Hritik Roshan wacdarihii taarikhiga aha ku dhigay.
Hritik iyo Abhishek isku sanad ayee fanka kusoo biireen oo Bollywoodka soo wada galeen balse waxaa magaciisa cirka galay sido kalena awood badnaaday Hritik.
waxaana dhacday inee aflaam wada sameyeen kuwaaso Abhishek door caawiye ah ku lahaaday balse waxwalbo waxay is bedeleen marka Dhoom 2 wada keenen waayo bandhiga HR uu filimkaan kumuujiyay waa mid lala yaabay.
Dhoom 2 waxaa maalgalisay shirkada Yash Raj Filims waxaana wada hogaamiyen Hritik Roshan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, Uday Chopra iyo Bipasha Basu halka uu Director ka ahaa Sanjay Gadhvi wuxuuna filimkaan noqday Blockbuster weyn.
Halkaan Hoose Kaga Bogo Xaqiiqooyin Filimkaan:
Xaqiiqada 1aad: Waa filimkii ugu horeyay e Hindi ah kaasi oo lagu duubo dalka Brazil
Xaqiiqada 2aad: Duubista filimkaan dib ayaa loo dhigay xiligii la bilaawi lahaa kadib markii Studio-yaha Yash Raj Filims daadad ama roobab xoog leh wax yeeleyeen.
Xaqiiqada 3aad: Waa filimkii ugu horeyay oo ay wada jilaan Hritik Roshan iyo Aishwarya Rai kadib markii mudo dheer la isku raadinayaye xidigaan inee aflaam isla sameyaan dhowr mashruucna ka baaqdeen sameyntooda.
Xaqiiqada 4aad: Aditya Chopra ayaa Aishwarya Rai ka ka codsaday in ay miisaankeeda dhinto maadama ay horey miisaankeda in badan ugu dartay sameynta filimka Bride & Prejudice.
Xaqiiqada 5aad: Priyanka Chopra ayaa markii hore loosoo bandhigay doorka Shonali Bose ee Bipasha Basu ku jishay filimkaan balse xidigtaan wey iska diiday doorkaas.
Xaqiiqada 6aad: Marka Abhishek uu Hritik kudhahaayo Shilin ayaan kukala baxeena oo ay shilinka kor u tuurayaan waa dhaqankii aabihiis sameyn jiray qaasatan filimka Sholay waayo Big B xili walba filimkaan xarash iyo madax ayuu kudhahaa Dharmendra.
Xaqiiqada 7aad: Waa filimkii ugu dambeyay ee Aishwarya Rai isticmaasho magaceeda kaaso aan Bachchan kujirin micnaha (Aishwarya Rai) bes ayaa loogu yeeri jiray wixii filimkaan kahoreyay balse markii filimkaan dhamaaday oo ay is guursadeen xidigahan aflaamteedi xigeen magaca Aishwarya Rai Bachchan ayaa la qori jiray.
Xaqiiqada 8aad: Super Star Hritik Roshan wuxuu filimkaan ku qaatay abaal marinta atooraha ugu wanaagsan Bollywoodka oo ay shirkada Filmfare Award bixiso.
Waxaa Aqrisay 1,726